#FBS10 MLNTRADERS ပြိုင်ပွဲ၏ ကံထူးရှင်နှင့်တွေ့ဆုံပါ
နိုဝင်ဘာတွင်၊ FBSမှ ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ သောရောင်းဝယ်သူများ မှတ်တိုင်ကို အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင် နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖောက်သည် တစ်ဦးတည်းကသာ ကုမ္ပဏီမှ ဆုလက်ဆောင်ရခြင်းမဟုတ်ပါ - ကျွန်တော်တို့သည် iPhone ၁၀လုံးနှင့် တံဆိပ်ရှိ မတ်ခွက်နှင့် တီရှပ်အစုလိုက် ဆုမဲများနှင့် #FBS10 MLNTRADERS ပြိုင်ပွဲအားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ လူပေါင်း ၉ ၀၀၀ကျော် ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး - ယင်းတို့ထဲမှ ကံထူးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗီယက်နမ်မှ မစ္စတာ Pham Phu Lam Sonနှင့် တွေ့ဆုံပါ!
"ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးကိုမတွေးဘဲ၊ အပျော်သဘောအနေနဲ့သာ ပါခဲ့တာပါ" - သူပြောခဲ့သည်။ FBS Facebook စာမျက်နှာကနေ #FBS10 MLNTRADERS အကြောင်းလေ့လာခဲ့ပြီး၊ FBSနှင့်သာဆို မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူးဟု သက်သေပြလိုက်သည့် ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ သူ့အတွက်ပထမဆုံးပဲဖြစ်သည်။
မစ္စတာ Pham Phu Lam Son သည် ၃၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး၊ Hyundai အရောင်းဌာနမှာ အလုပ်လုပ်ကာ၊ သူ့မိသားစု ငါးအရောင်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ကူညီနေတာဖြစ်ပါသည်။ သူသည်လည်း FBS ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိမှာတော့ iPhone X 256 GB ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်ကတော့ အရောင်းအဝယ်အကြောင်းပိုလေ့လာပြီး၊ ကားဝယ်ဖို့ပဲဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံခဲ့ပါသည်။ သူ့ဘက်မှာရှိတဲ့ စိတ်ချရတဲ့ပွဲစားနှင့်သာဆို၊ သူ့အတွက်မကြာတော့ပါဘူး။
ဂုဏ်ယူပါတယ် မစ္စတာ Pham Phu Lam Son နှင့် ကံထူးရှင်အပေါင်းတို့! ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး ၁၀သန်းသောလူအပေါင်းတို့ထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် - FBS မိသားစု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
FBS Traderနှင့် သွားလာရင်းရောင်းဝယ်ပါ
တက်ကြွသောသူများအတွက် စွယ်စုံသုံး အရောင်းအဝယ်ပလက်ဖောင်း၊ FBS Traderနှင့် တွေ့ဆုံပါ။
Trade 100 Bonus – ပူပူနွေးနွေးလေး
ကျွန်တော်တို့၏ အသစ်စက်စက် Trade 100 Bonusအတွက် သုံးဆဝမ်းမြောက်စရာပါ! ဤပရိုမိုးရှင်းစတင်မှုအား သင့်အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။